Mepụta ndị na-akwado akara na Zuberance | Blog MarTech
Gbanwee Ndị Ahịa n’ime Ndị Nkwado na Zuberance
Thursday, June 21, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Zọ kachasị mma iji kwalite akara bụ site na ịnwe ọtụtụ ndị ahịa nwere afọ ojuju na-ekwu maka ya. Onye ahịa kachasị mma ime ya bụ onye na - akwado akara - onye ahịa nke afọ ojuju ya ruru ogo. Ndị dị otú ahụ na-akwado akara na-atụ aro dị ike nke na-enwekarị mmetụta na-adịgide adịgide. Ma ụdị chọrọ ụzọ doro anya iji mata ndị ahịa dị otú ahụ na mbụ, wee mezie ha dị ka ndị na-akwado akara.
Zuberance, usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, na-ekwu na ọ ga-eweta azịza ya:
Zuberance na-arụ ọrụ na nchekwa data nke ika ahụ site na itinye ngwaọrụ ndị na-ege ntị na ntanetị na ịnye nyocha ngwa ngwa, iji mata nke ndị ahịa nwere ike ịkwado akara, ma dị njikere inye akara maka akara na oghere mmekọrịta. Mgbe ahụ, ọ na-enye ndị ahịa a ngwa ọrụ anọ: Nkwado Nyocha, Mkpesa Akaebe, Azịza Nkwado, na Enyemaka Advocate, nke na-enye ha ohere ịde ndụmọdụ na ihe ọ bụla gbasara mgbasa ozi ọ bụla dị.
Sdị ahịa na-erite uru n'ọtụtụ ụzọ karịa naanị visibiliti. Dịka ọmụmaatụ, onye ahịa na-eji ngwa Advocate Offer iji kesaa nkọwa nke onyinye ngwaahịa na ndị enyi na-atọghata ndị enyi dịka ihe nwere ike iduga maka ahịa. N'otu aka ahụ, onye ahịa nwere Advocate Azịza App na-aza ajụjụ ngwaahịa dabere na ahụmịhe ya, nke ga-eme ka onye na-azụ ahịa kwenye karịa onye ọrụ ụlọ ọrụ na-enye otu azịza ahụ.
Nchịkọta Nkwado Zuberance na-agbaso nsonaazụ na ezigbo oge iji chọpụta profaịlụ na-akwado ya site na nchịkwa mmadụ na ọrụ, ma nye akara ahụ ozi nyocha na ihe dị mfe nghọta dashboard. Zuberance nwere ọtụtụ ihe akaebe ndị ahịa na saịtị ha nke ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ otu esi eji nyiwe ụlọ ọrụ gị.
Zuberance na-enye ngwa ndị a ma ọ bụ na-enweghị onwe ha, ma ọ bụ na-enye ha dịka akụkụ nke ihe ngwọta ntụgharị zuru oke gụnyere akụkụ niile nke mgbasa ozi na-akwado nkwado. Ọganiihu nke Zuberance ma ọ bụ ngwa ọrụ ọ bụla na-enye ndị ụlọ ọrụ ohere ịgbanwe ndị ahịa dịka ndị na-akwado ndị ahịa na-adabere n'inwe ndị ahịa nwere ike iburu ụzọ. Maka nke a, enweghị ụzọ mkpirisi iji nweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ kacha mma yana ọrụ ndị ahịa impeccable.
Tags: ntinyekwado ngwaika akwadoika akwadonghọta ndị ahịaụmụ nwanyịokwu onu
Badgeville: Enkwalite Omume Omume site na Gamification